Kutengesa uye Kushambadzira Kurongeka: Kufungidzira Kwakanyanya kweRamangwana | Martech Zone
Isu nguva pfupi yadarika takave neakanakisa hurukuro naGiles House uye imwe yemisoro yehurukuro yaive kutengesa uye kushambadzira kuenderana. Nyowani pane iyo bvunzurudzo, MukatiVona ichangoburitsa izvi fungidziro yekutengesa uye kushambadzira kuenderana. Ivo akavakirwa pabhuku idzva, Yakanangana Kuti Ibudirire: Maitiro Ekubatanidza Yako Ekutengesa uye Ekushambadzira Matimu mune imwechete Simba Yekukura, yakanyorwa naInsideView's CMO Tracy Eiler, uye VP ye Enterprise Sales Andrea Austin.
Kufungidzira uku kwaive kwakavakirwa pamhedzisiro yeongororo ye1,000 vatengesi vekutengesa nekushambadzira. Ongororo yaEiler naAustin inoratidza kuti dambudziko rekusarongeka rinoramba richikura uye kudamburwa kuri kuita mhedzisiro.
Kutengesa uye kushambadzira kuenderana inyaya inopisa-bhatani iyo makambani anotarisana nekugadzirisa kamwechete uye zvachose. Hazvisi zvekungochengetedza kutengesa uye kushambadzira kubva pakuve paumwe neumwe huro; imo nekuti kuenderana kunoshandura kune mari uye nekukurumidza kukura. Saka, chii chinotevera? Mushure memwedzi yekukurukura nevezera rako, isu takafungidzira kwatinofunga kuenderana kuri kuenda kuitira kuti makambani afambe mberi. Tracy Eiler, CMO ye MukatiView
Vanyori vanopa zvirevo zvinomwe zvinotevera zvenguva yemberi yekutengesa uye kushambadzira kwekushambadzira sezvo mabhizinesi achiona zvakanakira kuenzanisa kushambadzira nekutengesa uye kugadzirira kuwedzera kuyedza kuyedza muna 2017:
Kukwira kwemutengesi wezano. Vatengesi vanobudirira kwazvo vanozova mushambadzi wevhenganisi. Pakazosvika 2020, kudiwa kwevatengesi veB2B kuchachinja kuda mumwe "mutengesi wekubvunza," sekureva kweForrester Research. Vatengi vari kuita tsvagiridzo pachavo uye havachadi zvekutengesa-based vatengesi, saka yechinyakare yekutengesa modhi inofanirwa kugadzirisa. Vatengesi vatsva ava vanozove nyanzvi pane yavo indasitiri, zvigadzirwa, vatengi vatengi, uye rwendo rwevatengi, uye vachazoda kushambadzirwa kwekushambadzira munzira. Mamwe maindasitiri anototanga kubatanidza kutengesa uye kushambadzira muzvikwata zvakafanana.
Kuyambuka-kudzidziswa kuchave kwakakosha. Vashandi vanonyanya kudiwa ndevaya vanotsvaga zviitiko zvinopfuura kwavo kwehunyanzvi, kusanganisira vatengesi vanonzwisisa kushambadzira nevashambadzi vane mamiriro ekutengesa. Makambani anofambira mberi anozoita zvepamutemo uye kukurudzira kurovedzwa kwepamuchinjikwa munzvimbo yebasa.
Iyo pombi ichave iyo yekutanga nzira yekuyera kushambadzira mashandiro.Zvinoenderana nekutsvaga kweInsideView, 66 muzana yevatengesi vanoti iyo pombi ndiyo nzira yekutanga yavanoyerwa. Makambani epamberi anotanga kutarisa timu mari, uko chikamu chega chega chevatengesi chichava basa rekushambadzira. Kushambadzira kunoitirwa kuti vashande pamwe chete nerevhi yega yega kusvika padanho ravanogona kuyera kukanganiswa kwavo pachikamu chevamiriri.
Rwendo rwese rwevatengi richava account-centric. Zvirongwa zveABM zvinoramba zvichikunda kumwe kudyara kwekushambadzira, kugadzira modhi yebudiriro iyo isingagumiri pakutengesa nekushambadza mune ramangwana. Gadzirira makambani kukoshesa account-based chinhu chose.
Yevatengi dhata data inova inonyanya kukosha. Indasitiri yekutsvagisa inoratidza kuti mabhizinesi anoisa data pakati pekushambadzira kwavo nekutengesa sarudzo dzinovandudza kushambadzira ROI ne15 kusvika 20% (Winterberry Boka). Kuwedzera mari pakushambadzira kuri kuwedzera uye tekinoroji yekutengesa, makambani akabudirira anoisa pamberi pekuyedza kugadzirisa pamwe nekubatanidza matekinoroji ehunyanzvi uye zano re data revatengi. Kuita izvi kuchabvumidza makambani kukudziridza kubatana, kugovana huchenjeri hwevatengi hunovagonesa kuenderana zvine hungwaru.
Mamireniyumu ane maitiro makuru. Muna 2016 Millennials yakapfuura Vacheche Boomers sechizvarwa chakakura kwazvo munyika. Izvo zvakare zvinoreva kuti ivo vari kushandura zvigadzirwa uye hunyanzvi seti yeanotengesa. Mamireniyumu ari kuita bhizinesi, kugadziridza, uye kubatana. Ivo zvakare vane akasiyana tarisiro yedzidzo, kutaurirana, uye kusimudzira basa. Makambani akabudirira anotanga kuchinjisa masitayera avo esangano kukwezva nekuchengetedza tarenda rakanakisa rechizvarwa ichi, uye voona kana vavhoterwa vakagadzirira kuenderana sechikamu chekuhaya. Uye mamireniyamu ezuva ranhasi ndivo vatengi vemangwana. Makambani anofanirwa kujairana nemaitiro avo.
Academia inobata. Vhivhesiti vanozoona zvirongwa zveB2B zviri pamutemo sekukosha mukugadzirira vadzidzi vepasirese pasirese, pakutengesa, kushambadzira, uye madhiri e data. Tarisira kuona mamwe mayunivhesiti achipa madhigiri mukutengesa, kwete chete kushambadzira kana accounting. Zvakare, mamwe masangano anozovandudza madhigirii avo ekushambadzira kupfuura kwekushambadzira kwevatengi kuti vatarise paB2B. Chekupedzisira, tarisira mamwe madhiri-anotariswa madhiri mune data sainzi uye data analytics sezvo dhata inova inonyanya kukosha pakubudirira kwebhizinesi.
Heano infographic, Wepamusoro 5 Kufembera kweRamangwana reKutengesa & Kushambadzira Kuenderana:
MukatiView masimba masimba kutaurirana kwebhizimusi repasirese, zvichibatsira anopfuura makambani zviuru makumi maviri kutsanangura patsva nzira dzekuenda kumusika kubva kuvhoriyamu-based kune yakanangwa nzira. Kutungamira kwaro ungwaru hwemusika chikuva chinobatsira kutengesa uye zvikwata zvekushambadzira zvinokasira kuona uye kukodzera zvakanakisa zvinangwa, kuita nehukama hwakawanda, kuvhara mamwe madhiri, uye kuchengetedza uye kuwedzera maakaundi. MukatiView ndiyo yega kambani inotanga nekambani yeindasitiri yakanyatsojeka uye data rekubata uye inosimudzira neyakafanira, chaiyo-nguva bhizinesi nzwisiso uye kubatana kwechokwadi.
Tags: account based kushambadzirakubvunza kutengesakubvunza kutengesaCRMmuchinjikwa-kudzidziswadata yemutengikuenderana kwekushambadziraKushambadzira kuitaMapaipikuenderana kwekutengesakutengesa uye kushambadzirakutengesa uye kushambadzira kuenderanakutengesa kuita
Google Optimize Kutangisa kweVashambadziri kweKuyedza